सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष : दोधारमा मधेशी दल - सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष : दोधारमा मधेशी दल
सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष : दोधारमा मधेशी दल
नेपालबहस संवाददाता २०७४, २१ चैत्र 239 Views
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई मात्र सरकारमा ल्याउन पहल गरेकोमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त ग¥यो । राजपाको असन्तुष्टि पछि प्रधानमन्त्रीले उसलाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल थालेपछि राजपाका नेताहरूले सरकारमा सहभागिताका बारेमा औपचारिक छलफल सुरू गर्दै दुुईवटा महत्वपूर्ण काम गरे । पहिलो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए र अर्को राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीलाई जिताए । राजपाका नेताहरूको शब्दमा यो दुबै राजनीतिक निर्णय भनेको ‘गुण तिर्न’का लागि हो ।
वाम गठबन्धनले यहि गुण तिरेको आधारमा संविधान संशोधन, जुन मधेशी दलहरूको मुख्य माग हो, गर्ने विश्वासका आधारमा ओलीले विश्वासको मत र भण्डारीले विजयको मत प्राप्त गरेका हुन् ।
आफ्ना माग सम्बोधन भएमा सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिका साथ राजपा र फोरम एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग छलफललाई तीव्र पारेका छन् ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीबीच छलफलपछि राजपा सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएको हो । सबै मिलेर देशको विकास गर्न राजपालाई पनि सरकारमा ल्याउन लागिएको एमालेको दाबी छ भने देश विकासको मुद्दामा आफूहरू पनि दृढ रहेको र आफ्ना मागहरू पूरा भए आफूहरू सरकारमा जाने राजपाको तर्क छ ।
यद्यपी राजपा नेपाल सरकारमा जान मानसिक रूपले तयार भए पनि उसले स्पष्ट रूपमा मुख खोलेको छैन र नेताहरू दोधारे किसिमले कुरा गरिरहेका छन् । केही नेताहरू सत्ताबाट बाहिर रहेको छटफटाहटका रूपमा सहभागिता खोजेका छन् भने कोही अहिले नै सरकारमा जानु हुन्न भन्ने तर्क गर्छन् तर सरकारमा जानु नै पर्छ भन्नेहरूको मत पार्टी भित्र बलियो छ ।
उता संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने गरी सरकारमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रले छलफल सुरू गरेको थुप्रै दिन बितिसकेको छ तर उसको सहभागिता अहिले निश्चित भएको छैन ।
यद्यपी फोरम र राजपासँगको अलग अलग वार्तामा कुनै पनि पक्ष निष्कर्षमा पुगेको स्थिति छैन । फोरमसँग सहमति भइनसक्दै सरकारले राजपालाई सरकारमा आउन गरेको आह्वानको अर्थ दुबै पार्टीसँग एकै प्रकारको सहमति गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
समर्थन किन ?
मधेशी दलले तीन कारणले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । पहिलो–एमाले र माओवादी केन्द्र सविधान संशोधनप्रति सकारात्मक हुनु, दोस्रो–प्रदेश दुईमा वाम गठबन्धनले पनि फोरम–राजपाको सरकारलाई समर्थन गर्नु र तेस्रो–विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार चाहनु ।
माथिको तीन कारणमध्ये पहिलाको दुई कारण राजनीतिक हो भने तेस्रो कारण सैद्धान्तिक हो । दुबै पार्टीभित्र पलाएको सत्ता स्वार्थ र लोभले नै उनीहरू संविधान संशोधनको सुनिश्चित आधारबिना सरकारमा जाने औपचारिकता प्रदान गरेका छन् । फोरम र राजपाको सरकारमा जाने निर्णयले मधेशमा नयाँ खालको टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक हो । कुनै प्रकारको सहमतिको आधार तय नै नगरी सरकारमा जान हतारो गर्नु मधेशी दलको अपरिपक्वता हो ।
आखिर राजनीतिक खेलाडीका रूपमा परिपक्व मानिएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले किन अपरिपक्वता प्रर्दशन गरे त ? क्षणिक स्वार्थका लागि या यस पछाडि अन्य केही कारण पनि छन् ?
प्रधानमन्त्री ओली र मधेशकेन्द्रित दलप्रति ग्राउण्डमा असन्तुष्टि छँदैछ । तर, राजपा र फोरम नेपालको आन्तरिक तथा भूराजनीतिक दबाबका कारण बाध्य भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने ठाउँमा पुगेको भन्न सकिन्छ ।
सविधान संशोधनलाई बटमलाइन बनाएको यी दुई दलले एक आपसमा सहमति नगरी अलग अलग बार्गेनिङ्ग गर्नु चतुर ओलीको रणनीति हो । तर दुबै मधेशी दल ओलीको चातुर्यतामा शनैःशनै फस्दै गएका छन् ।
ज्ञातव्य के छ भने यसअघि तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई, सभापति शेरबहादुर देउवालाई अथवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा यी दुई दलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्र समर्थन गरेका थिए । तर ओेलीलाई उनीहरू उधारो समर्थन गरि बलियो प्रधानमन्त्री बनाउन मद्दत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली मधेशका लागि आलोचित पात्र हुन् भन्ने यिनै मधेशी दलहरू हुन् । हिजोका आलोचित पात्र रातारात कसरी प्रिय पात्र बने शायद यसको जबाब उपेन्द्र महन्थहरूसँग छैन । मधेश आन्दोलनको बेला ओलीको अभिव्यक्तिले मधेशमा तनाव पनि भएको थियो । आन्दोलन झन् चर्केको थियो । यहाँसम्म कि मधेशमा ओलीलाई ‘प्रवेश निषेध’ सम्मको नारा लागेको थियो ।
आन्दोलनको बेला आन्दोलनकारीले मधेशका ठाउँ–ठाउँमा ओली निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेका थिए । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले त्यतिबेला ‘एमालेमुक्त मधेश’ को घोषणा नै गरेका थिए ।
तात्कालीन माओवादी केन्द्र र काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा सविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेपछि एमालेले त्यसको खुलेर विरोध गरेको थियो र फलतः एमालेकै असहयोगका कारण पास हुन सकेको थिएन । तर हिजोको एमालेले कुन चमत्कार ग¥यो कि उसले संविधान संशोधनका लागि तयार भएको छ र फोरम र राजपा उसको पछि पछि कुद्दैछन् ? मधेश यस यक्ष प्रश्नको जबाब खोजिरहेको छ ।
२०७४, २१ चैत्र
त्रिपालको छानो राखेर सुत्छन् कैदीबन्दी !
च्याम्पियन्स लिगमा रियलको विजयी शुरुवात
भारतले पाकिस्तानलाई हरायो, बन्यो समुह बिजेता !
चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन गर्न आग्रह
अख्तियारका प्रमुख घिमिरेको संसदीय सुनुवाई आज
रोनाल्डोलाई रेड कार्ड, च्याम्पियन्स लिगमा जादु देखाउन असफल !
टिप्परको ठक्करबाट १२ बर्षीय बालकको मृत्यु